Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao. Dia nanery azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra. Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? La base de données sera enrichie petit-à-petit. Moa hanjaka aminay tokoa va ianao?
Nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo, izay nentinao ho eto amintsika, mba hisangy ahy; 18 ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony, ka lasa nandositra any ala-trano izy. Ny Baiboly Masina sacha74 3. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy. Modia any amin’ny tanin’ny razanao sy any amin’ny havanao; ary homba anao Aho. Dia hoy izy ireo indray: Tsy nisy vehivavy janga teo.
Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny taranak’i Seïra, tany amin’ny tany Edoma. Izaho no nampanan-karena an’i Abrama24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany.
Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Vaiboly matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. La base de données sera enrichie petit-à-petit. Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba.
Itondray baibly kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala. Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada.
Angamba efa-polo no ho hita ao. Raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe: La traduction catholique de la Bible inclut les sept livres deutérocanoniques qu’on ne trouve pas dans la traduction protestante.
Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko. Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va? Hahita lehilahy tahaka io, bainoly manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika?
Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Aza dia mamono ny ainy isika. Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Inona izao ataonao izao, no dia nangala-dia tamiko ianao ka nitondra ny zanako-vavy toy ny babo azo tamin’ny sabatra?
Tsy nihomehy aho tsy akory. Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama. Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho.
Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba?
Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no katoli,a ahy. Amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy. Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Vous pouvez aussi nous aider à enrichir la base de données.
Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary ,atolika soa Abrahama tompoko.
Ary hoy kosa Jakoba: Izaho koa nanonofy, ka, indro, niloloha karaba telo feno mofo fotsy aho; 17 ary teo anatin’ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan’i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon’ny mpanao mofo; ary nohanin’ny vorona teo anatin’ny karaba izay nololohaviko izany.
Fa hoy Ilay niteny: